Iimpawu kunye nokhathalelo lwekati entle yaseYork Chocolate | Amakati eNoti
Ukuba uyazithanda iikati ezinoboya obumnyama kwaye ungathanda ukuba nayo inebhatyi ende kwaye enoboya, uhlobo Iitshokholethi zase York isenokuba yile uyikhangelayo. Le ndoda inoboya obuphakathi inembonakalo ekrelekrele, imbonakalo yokwenyani yesimilo sayo.
Ungumntu othanda uboya othanda ukufunda izinto ezintsha kwaye, njengazo zonke iifinal zasekhaya, ube liziko lokuqwalaselwa komntu omthandayo kakhulu.
1 Imvelaphi kunye nembali yekati yaseYork Chocolate
4 Ukunyamekelwa kwekati yetshokholethi yaseYork
5 Ixabisa malini ikati yetshokholethi yaseYork?
6 Iifoto zekati zeYork Chocolate
Imvelaphi kunye nembali yekati yaseYork Chocolate
Ngeminyaka yoo-80 ikati egama linguBlacky eyayihlala kwifama yaseNew York yawela iindlela ikati elahlekileyo iSmokey. Amantshontsho azo ezelwe kwakufanele ukuba amhle, ngakumbi lawo ayenoboya obuninzi obunombala wetshokholethi. Le furry encinci yatsala umdla omkhulu emntwini wakhe, kangangokuba wamazisa kwindawo ahlala kuyo.
Ke, ngokuthe ngcembe wathandwa kakhulu, kuba ukongeza ekubeni mhle wayenothando nobubele. Ekupheleni kweminyaka engama-80 kwakukho iikopi ezininzi zolu hlobo, kwaye kwi-90s kwenziwa umgangatho. Namhlanje yamkelwe njengohlobo lweCFF kunye nemibutho ye-ACFA.
Ikati yetshokholethi yaseYork Inoboya obuphakathi ngokomlinganiselo, inobunzima obungu-5-6kg kumadoda ize ibe ncinane kancinci kubafazi. Umzimba ukhuselwe luluhlu oluninzi lweenwele ezinde, ezinombala wetshokholethi. Inokuba namabala amhlophe ebusweni okanye emsileni.
Sisilwanyana esomeleleyo, esinobunzima besisipha, kwaye silinganiswe kakuhle. Intloko yakhe inde. Amehlo aluhlaza, omdaka okanye golide, kwaye iindlebe zikhombe.
Umlinganiswa wethu ophambili uneempawu ezintle. Unomdla kakhulu, uyahlekisa kwaye ukrelekrele. Uyakonwabela kokubini ukulala kancinci kunye nokuxhoma ngaphandle edlala nabo basondeleyo kuye. Uyakuthanda ukuphululwa nokuthanjiswa; Nangona kufuneka sazi ukuba ugcinwe kancinci nabantu angabaziyo, kodwa akukho nto ikhathalwayo ngekati ayinakuyisombulula.
Inqanaba lamandla aphakamileyo ngokufanelekileyo, ke kubalulekile ukuba unikezele ixesha kuyo ukuze uyitshise kwaye uzole.
Ukunyamekelwa kwekati yetshokholethi yaseYork
Ukuba sisilwanyana esidla inyama kuyakufuneka unike ukutya okutyebileyo kwiproteni yezilwanyana engenazo izityalo, okanye umnike ukutya kwendalo okunje ngeYum Diet yeekati, iSumum okanye efanayo.
Yonke imihla Kuya kufuneka ubrashe ngekhadi, kwaye ngeveki ucoce amehlo akhe neendlebe ngegawuni ecocekileyo. Musa ukumhlamba, kuba akayidingi (ngaphandle kokuba eyeka ukuzilungisa okanye sele emdaka kakhulu, kunjalo).
Yonke imihla kufuneka udlale naye ukuze azilolonge kwaye amthintele ekwenzeni ubumdaka ekhaya. Ukwenza oku, unokuthenga izinto zokudlala kwivenkile ehambisa izilwanyana, okanye uzenzele ngokwakho kwibhokisi yekhadibhodi okanye kumtya.
Umfanekiso - iiWikipets.es
Nangona luhlobo olunandipha impilo entle, Qho xa ukrokrela ukuba akaphilanga kufuneka umse kugqirha wezilwanyana ukuze ahlolwe kwaye anikwe unyango olufanelekileyo. Ukongeza, kuya kufuneka uye kwingcali ukubeka i-microchip, i ugonyo kwaye yintoni castre ukuba awufuni kuyenza izale.
Ngokunjalo kubalulekile ukuba ususe isitulo esantini, kwaye ucoca itreyi yaso kanye ngeveki okanye ngenyanga. La manyathelo aya kuthi ancede ekuqinisekiseni impilo yomfazi onqabileyo, kunye noxolo lwengqondo.
Ixabisa malini ikati yetshokholethi yaseYork?
Ngaba uzimisele ngokupheleleyo ukufumana intshontsho lekati laseYork Chocolate? Ukuba kunjalo, okokuqala Kubalulekile ukuba, ukuba uhlala nabantu abaninzi, ubabuze ukuba bayayifuna na intsholongwane endlini. Kwaye ukuba xa isilwanyana kusiwa kwindlu apho bengavumelani bonke abahlali, kulula ukuba iingxaki zivele ...
Ke ngoko, kuphela xa isigqibo sithathiwe phakathi kwabo bonke, iya kuba lixesha lokuqala ukukhangela iindawo zokuzalela zohlobo. Nje ukuba uyifumane, kuya kufuneka uyazi ukuba akukho njana iya kwahluka kunina ubuncinci kude kube ziiveki ezisibhozo ubudala, kuba ebuntwaneni obufunekayo kufuneka isele ubisi kwaye, nokuba ifunde ukuziphatha njengekati.
Ngokumalunga nexabiso, iya kuba ijikeleze 800 euro. Ukuba uza kuyithenga kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, iindleko zinokuba sezantsi.
Iifoto zekati zeYork Chocolate
I-Chocolate yaseYork yinto evuthayo ukuyonwabela. Inokuthwala, ubungangamsha, kunye namehlo ... ukuba akunakwenzeka ukuba ulibale. Ke ngoko, apha ngezantsi sikushiya nothotho lwemifanekiso yolu hlobo lumangalisayo lwekati:
Umfanekiso -Igama eliphambili-suggestions.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati yetshokholethi yaseYork, umntu onoboya ofuna ukuba yipherher
Ungayibona njani into elumayo?
Yintoni ekufuneka ityiwe yikati encinci?